काठमाडौंको आधिकारिक अपडेट : बालेनले ४०२ मतसहित अगाडि बढ्दा अरु कसले कति मत ल्याए ? - Nepalese Times
काठमाडौंको आधिकारिक अपडेट : बालेनले ४०२ मतसहित अगाडि बढ्दा अरु कसले कति मत ल्याए ?
Nepalese Times May 14, 2022 (1 Week ago) 411 Views
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता कायमै गरेको छ । शाहले पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार ४०२ मत पाएका छन् ।
यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले ३१९ मत ल्याएका छन् भने नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले २०२ मत प्राप्त गरेकी छिन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका सुमन सायमीले ६४ मत ल्याएका छन् । यस्तै उपमेयर पदमा सबैभन्दा धेरै नेकपा एमालेकी उपमेयर उम्मेदवार सुनिता डंगोलले ५२० मत ल्याएकी छिन् ।
यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले ११० मत ल्याएका छन् भने विवेकशील शाझाले ११० मत प्राप्त गरेका छन् । विहान साढे ९ बजेबाट मतगणना सुरुभएको थियो । अहिले पनि मतगणना भइरहेको छ ।